Xalayaa Fayyaa - Afaan Oromo | English | Amharic
Home / Archive by category "Fayyaa"
Dr. Gurmeessaa Hinkoosaa eenyu dha laata? Gammadaa Olaanaatin Uummanni Oromoon hayyoota hedduu Oromiyaaf furmaata ta’aan akka cirracha garbaati qaba. Hayyoonni Oromoo fi Oromiyaan qaban ammoo beekumsa adda addaa kan gonfatanii fi beekumsi addunyaa kun kan keessaatti walgaheedha. Haata’u malee...
Faa'iidaa Fayyaa Walqunnamtiin saalaan fidu Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha. Walqunnamtiin saalaa ijoollee horachuun ala bu'aa hedduu qaama keenyaaf kan buusu qaba. Tuqaalee 9 kanneen qunnamtiin saalaan fidu asii gadii tarreefame faa'iidaasa isiniif ibsuu...
Akkamiin turtii walqunnaamtii saalaa dheeressuu danda'uu? Wantoota dafanii xumuruu hin barbaadamne keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha. Keessattu waarra dhiiraf walqunnamtii saalaa turtii gabaaba qabaachuun qaani ta'u danda'a. Haadha manasaani yookan jaalalleesaani gammachiisuf turtii yeroo dheera...